Holms SK silvermedaljörer Ini Sundcupen! | Holmbygden.se
Posted on 14 Kurume, 2016 kubudikidza Holmbygden.se
Final chikwata uye sirivha medalists muna Sund Cup 2016, Nordichallen.
Last China okisheni yevamiriri musangano kuti Holm SK achaita kutamba Division 5 muzhizha kuonga chivimbo chikwata akatora kumba Medals sirivha iri Kwazvo Cup pamusoro vhiki rakanga. The Tournament akanga muchinangwa Nordichallen pazuva nomwe-chechetere. Muboka Danho HSK yakahwina machisi maviri uye rarasika. Mushure zvishoma huta uye shaky yokutanga machisi pamusoro Arbrå BK / Vallsta IF, pamwero misoro murume, uye aigona ipapo kuuya Vakatarisira nani mitambo yavo inotevera machisi. Against Hassels IF uye Ik Bondsjöhöjdens akahwina imwe nguva chete 1-0 uye 2-1.
Muduku zvinonakidza quarterfinals HSK akaita simba kupera pamusoro Kubikenborgs IF uye akapora panguva modes maviri kubva 0-1 uye 1-2 kuti 2-2 kana mugumo chiratidzo tsinga. The mutambo kwakasarudzwa ipapo shootout uye Peter Lind akava mutambo gamba pamwe kuputsika kusatombofunga kuti akaponesa Holm chakasara mutambo. Ona shootouts pazasi.
Mugore Semi-wokupedzisira vaibatwa kuti kurwisa zvakanaka, asi Holm akatora musha hwomutambarakede kutungamirira pamusoro Bondsjöhjödens Ik pamwe 2-0 sezvo equalizer 2-1 mune rokupedzisira mumaminitsi. Kokutanga muupenyu akawanda aiva Holms SK Saka Cup chokupedzisira!
Mumazuva okupedzisira vakasangana zvakare ARBRÅ BK / Vallsta IF, asi akanga kamwe zvakare kuvakunda Holm vakomana. It Akakokwa Zvisinei, kuzvidzivirira kupfuura muboka pachikuva, asi kuguma Zvakaguma chete 0-4. Aunganidze Simudzirai kwevhiki wakanaka chikwata Holm, netarisiro vakaroverera zvimwe chivimbo nokuda mwaka. Peter Lind akanga anonziwo chinokosha mutambi, izvo pakutanga wakaramba chete murairidzi asi akaiswa pamusoro magiravhusi uye kupinda nechinangwa.
Nechekare manheru ano Ndicho chinotevera dambudziko uye mutambo wekutanga Heat Cup musi Västhagen pamusoro Nedansjö Ik wachi 20:00. Welcome rokumukurudzira musi Team Holm! The yasara mutambo- uye kuekisesaiza iwe nguva dzose kuwana holmssk.se/kalender.